Gịnị Bụ SQL Injections? - Ntuziaka site na ihe mgbochi
SQL ogwu ogbugba bu ihe omuma mbanye, nke otutu ndi na-acho ocha na-acho ohia ruo taa. Mwakpo anwere ike imebi nchebe na nzuzo nke iji weebụsaịtị. Ọ na - eji nkwụsị nke koodu weebụ wepụta oghere nche,nke hackers nwere ike ịnweta nchekwa data nke a na saịtị. Site na echiche a, ọ na-ewe mgbalị nke ndị ọkachamara nwere ahụmahụ ịchọta mgbọrọgwụ nanweta nkesa site na ebe dịpụrụ adịpụ site na netwọk. Site na ogbugba ogwu SQL, onye nwere ike ichota ozi sitere na weebụsaịtịdị ka aha njirimara, okwuntughe na ozi kaadị akwụmụgwọ - the bar stool warehouse.
Asụsụ Nchọpụta Structured (SQL), bụ asụsụ mmemme, nke na-enye ohere maka kọmputaiji nweta, dezie ma ọ bụ dee data na ihe nkesa. SQL injection na-arụ ọrụ na ụdị ụfọdụ ụdị data nkesa, nke na-eweta ụdị ansogbu. Ụfọdụ n'ime ọdụ data n'okpuru agha a gụnyere MS SQL Server, Oracle, Access, Filemaker Pro, na MySQL. Site aechiche nke onye mmemme, ụdị ntanetị ọ bụla ma ọ bụ igbe dị na ntinye ederede na-enye ohere ịnweta iwu na ihe nkesa ahụ. NikChaykovskiy, nke Ọkachamara Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ihe ịga nke ọma, kọwara na ndị na-agba ọsọ na-eji nsogbu a na ọdụ data dị otú ahụ ma nweta ọtụtụ mwakpo.
SQL ịgba ogwu na-arụ ọrụ
Ọtụtụ weebụsaịtị na-akwado ụfọdụ ụdị nke onye ọrụ nwere ike itinye ụfọdụ n'ime data ahụ..Nke aohere bụ nanị ụzọ ndị ahịa nwere ike isi tinye na saịtị ma nweta ụfọdụ mkpa ha na ngwọta ha. Ala, nke nwere ikekwe ka iwu ndenye dị ka ndị a gụnyere ụdị, tebụl, arịrịọ nkwado, bọtịnụ ọchụchọ, ikwu ubi, mpaghara nzaghachi, debanye ahana-abanyekwa na abanye na ụdị. Onye nkesa na-agụ data site n'ụdị ndị a dị ka iwu, nke na-enye ohere ka onye ọrụ ahụ dezie ma gbanwee ozina ihe nkesa. Ụfọdụ usoro iji gbochie mbuso agha a nwere ike ịgụnye izo ya ezo nke ozi na ụdị ntinye tupu iru sava.
SQL ogwu ogbugba mgbochi jiri ohere a. Enwere ihe ize ndụ na ihe nkesa ahụ, nkeọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-eji igbu ndị ọzọ ụdị iwu maka ọgụ a. Ndị omempụ na-emebi nchebe nke ndị sava site na itinye ihe ọzọụdị iwu na ihe nkesa. Mwakpo a nwere ike ikpughe ozi bara uru dịka ozi ọ bụla dị n'ụdị ntinye ederede.Ọzọkwa, hacker nwere ike ịkwalite faịlụ, ibudata, dezie, dochie ma ọ bụ hichapụ faịlụ dị na ihe nkesa nke ọdụ data ndị a. Ọdị mkpa iji koodu nchekwa mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị.
Maka azụmahịa azụmahịa ọ bụla na-agba ọsọ nke ọma, ọ dị mkpa inwe ụfọdụnyocha zuru oke nke nchedo cyber. Otú ọ dị, anyị na-eme weebụsaịtị na-echekwa ọrụ ịzụ ahịa, nke na-enye ohere maka ahia ma ọ bụ ịzụtasite n'aka onye zụrụ ya. Ebumnuche nke onye na-achọ ihe na-adịghị echebara echiche, nke a na-eme ka usoro ahụ dum dị mfe. Ntugharị SQL bụ otuụdị mbanye anataghị ikike, nke utilizes na vulnerability nke ọtụtụ website klas. Onye na - egwu egwu nwere ike ịnweta nbanye na ihe nkesa ma mee ụfọdụ n'ime isihacks na ọgụ. Ụdị nsogbu a na-eme ka nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ dị, nke a nwere ike ime ka mgbalị SEO daa. Ị nwere ikejiri ntuziaka a iji zere ọgụ mgbochi nje nje na saịtị gị. Ọzọkwa, ị nwere ike ime ka ndị ahịa gị mara ihe ize ndụ dị na yaha nwere nchebe pụọ na mwakpo ahụ.